कास्की २ को मतगणना अन्तिम चरणमा, कसले बाजी मार्ला ? « Postpati – News For All
कास्की २ को मतगणना अन्तिम चरणमा, कसले बाजी मार्ला ?
मंसिर १५, पोखरा । कास्की क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की उम्मेदवार विद्या भट्टराई विजय नजिक पुगेकी छन् ।
यो निर्वाचन क्षेत्रका ३ वटा वडा अर्थात् ४, ७ र ८ वडाको मतगणना बाँकी रहँदा उनले २० हजार ७ सय ९७ मत प्राप्त गरेकी छन् भने नेपाली कांग्रेसका खेमराज पौडेलले १२ हजार २ सय ५५ मत प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुबीचको मतान्तर ८ हजार ५२२ रहेको छ ।
वडा नम्बर ४ मा २ हजार २ सय ३८, वडा नम्बर ७ मा ४ हजार ६ सय ९ र वडा नम्बर ८ मा ६ हजार ५ सय ६८ मतदाता रहेका छन् ।
तर, ती वडामा भएको सबै मत खसेको छैन । ती तीनै वडामा नेकपा र कांग्रेसको भोट हाराहारीमा खसेको अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो मतपरिणमाले नेकपाको विजय सुनिश्चितजस्तै भए पनि मतान्तरभने अहिलेभन्दा घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
धरानमा नेकपालाई झड्का, काँग्रेसको ४२४ मतको अग्रता
यसअघि नेकपाले जितेको धरान उपमहानगरपालिकामा काँग्रेसले अग्रता बनाएको छ ।
कूल १४ हजार २९६ मत गन्दा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार तिलक राइ ६८५८ मतका साग अग्रता बनाएका छन् ।
यस्तै नेकपाका प्रकाश राईले ६४३४ मत ल्याएका छन् । काँग्रेस उम्मेदवार नेकपा उम्मेदवार भन्दा ४२४ मतले अघि रहेका हुन् ।
बाग्लुङको प्रदेश सभामा जनमोर्चा उम्मेदवारले उछिने कांग्रेसलाई
बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा (ख)मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समर्थित राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार खिमविक्रम शाहीले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जितबहादुर शेरचनलाई पछि पारेका छन्।
सुरूदेखि अग्रता लिएका जितबहादुर पछिल्लो समय पछाडि परेका छन्।
प्राप्त नयाँ मतपरिणामअनुसार शाहीले २१९७ मत पाएका छन् भने जितबहादुरले २०४६ मत ल्याएका छन्। मतगणना जारी छ।
ऐरावती गाउँपालिका १ मा नेकपा र २ मा बागी विजयी
प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका वडानम्बर १ को वडाध्यक्षमा नेकपाका द्रोणकुमार पाण्डे विजयी भएका छन् । आइतबार अपरान्ह सकिएको मतगणनामा विपक्षी नेपाली कांग्रेसका अमर रेश्मी मगरलाई ९ मतले पछि पार्दै पाण्डे वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।
पाण्डेले ६८७ मत पाएर जित्दा मगरले ६८७ मत प्राप्त गरेका छन् । यसअघि पनि सो वडामा तत्कालीन माओवादीले जितेको थियो । उता ऐरावत २ को वडाध्यक्षमा भने नेकपाका बागी उम्मेदवारले जितेका छन् ।
छडी चुनाव चिन्ह लिएर उठेका नेकपामा स्थानीय नेता हिमेशकुमार घर्तीले ८५५ मत प्राप्त गरेर वडाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिद्धन्द्धी राष्ट्रिय जनमोर्चाका मोहन विश्वकर्माले ५०४ मत प्राप्त गरेका छन् । यहाँ राजमोलाई केन्द्रबाट नेकपाले समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय कमिटीले अवज्ञा गरेर घर्ती मगरलाई उठाएको हो ।
नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज कृष्णध्वज खड्का,जिल्ला अध्ययक्ष तुलसीराम शर्मा लगायतका नेताकै अगुवाईमा घर्तीलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो । उनको पक्षमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणी थापा समेत उभिएका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रको सहमति विपरित स्थानीय नेकपाले घर्तीलाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
२०७६ मंसिर १५,आईतवार को दिन प्रकाशित